Indawo Yokuphumula Ejabulisayo - I-Airbnb
Indawo Yokuphumula Ejabulisayo
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Tony
Indlu yami yasedolobheni enamapulangwe amabili negalaji elise-Jacksonville, NC izokunikeza ikamelo lokulala elingu-1 nendawo yokugezela egcwele engu-2. Le ndlu inendawo enhle yokuhlala ngaphandle kanye negceke elihle lokuphumula. Ezinyangeni zentwasahlobo nehlobo.
Phumula futhi uphumule kule ndawo ezolile, esesitayeleni.
Le ndlu ingasetshenziswa ngokugcwele yizivakashi zami nganoma yisiphi isikhathi ngokuzingenisa ngokungena nge-elekthronikhi. Asikho isidingo sokuhlangana nanoma ngubani ukuze uthole okhiye bokungena.
Indlu yami yasedolobheni enamapulangwe amabili negalaji elise-Jacksonville, NC izokunikeza ikamelo lokulala elingu-1 nendawo yokugezela egcwele engu-2. Le ndlu inendawo enhle yokuhlala ngaphandle kanye negceke elihle lokuphumula. Indawo ezungeze idolobha elikhulu ithule kakhulu inikeza izivakashi indawo yazo yangasese..
Ngisho nalokhu kuyimfihlo endlini, ususondele kakhulu kuzo zonke izitolo zokuthenga nezindawo zokudlela e-Western Boulevard. Izinto zikagesi eziyisisekelo ziyatholakala (i-microwave, izinto zokupheka, umshini wokuwasha/wokomisa, umshini wokuwasha izitsha, i-Keurig). Indawo yokudlela negumbi lokuphumula likuvumela ukuba uzenze uzizwe usekhaya ngokudla futhi uphumule kakhudlwana. I-smart TV yesikrini esine-Wi-Fi iyatholakala. Indawo AYIHLANGANYELWA futhi izivakashi zizosebenzisa yonke indawo.
Nginesifiso esikhulu sokuhamba futhi ngibe nenhlanhla yokuvakashela emazweni angaphezu kuka-35 emhlabeni jikelele. Uhambo lwami lungigqugquzele ukuba ngibungaze abanye futhi ngibanikeze
Izivakashi zizokwazi ukuxhumana nami noma nini lapho zidinga nge-app ye-AirBnB, ngomyalezo wombhalo, noma ngefoni. Uma kunenkinga endlini, usizo luseduze uma kudingeka.